के हो स्कर्भी? यसको कारण, तत्वहरु, लक्षणहरु र उपचार बिधि
शुक्रबार, असोज १, २०७८ ०१:१९:५१ युनिकोड
लामो समय देखि भिटामिनसीको गम्भीर कमीका कारण हुने समस्यालाई स्कर्भी (Scurvy) भनिन्छ । स्कर्भीका कारण रक्ताल्पता, अक्षमता, थकान तथा कमजोरीको समस्या, हातखुट्टा दुख्ने समस्या, रक्तस्रावको समस्या, शरीर सुन्निने समस्या, घाऊ चोटपटक चाँडो निकोनहुने समस्या, गिँजामा घाऊहुने समस्या तथा दाँतै झर्ने समस्या जस्ता अनेक समस्या देखा पर्न सक्छन् ।
कनेक्टिभ टिस्यूमा हुने कोलाजेनको निर्माणमा भिटामिन सी को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। रगतका नसा मांसपेशी आदिको निर्माणमा कनेक्टिभ टिस्यू चाहिन्छ । भिटामिन सी को कमीले रोग प्रतिरोध क्षमता शक्तिमा समेत असर पुग्छ । कोलेस्टेरोलको मेटाबोलिज्ममा पनि भिटामिनसीको आवश्यकता हुन्छ ।
भिटामिन सी का कामहरुलाई बुधागतरुपमा यसप्रकार छन् -
कोलाजेनको निर्माणमा । कोलाजेन एकप्रकारको प्रोटीन हो, जसले कनेक्टिभ टिस्यूलाई एउटास्वरुप र स्थायित्व दिन्छ ।
कोलेस्टेरोल तथा प्रोटीनको मेटाबोलिजममा मद्दत गर्दछ ।
रगतका लागि आवश्यक फलामको शोषण गर्नमा सहयोग गर्दछ ।
एन्टिअक्सिडेन्टका रुपमा काम गर्दछ ।
घाऊलाई चाँडो भन्दा चाँडो निको बनाउन सहयोग गर्दछ ।
डोपामिन र एपिनेफ्रिन जस्ता न्यूरोट्रान्समिटरको निर्माणमा सहयोग गर्दछ ।
भिटामिन सी को कमीनै स्कर्भीको समस्याको मुख्य जड हो । भिटामिन सी को रासायनिक नाऊँ एस्कर्बिक एसिड हो ।
कारक तत्त्वहरु :
हाम्रो शरीरले भिटामिन सी को निर्माण गर्न सक्दैन । तेसैले भिटामिन सी का लागि हामी बाहिरी स्रोतमा निर्भर रहनु पर्छ । अमिला फलफूल र सागसब्जी भिटामिन सी का प्रमुख स्रोत हुन् ।
भिटामिन सी को कमी हुनुमा निम्न कारकतत्त्वहरु हुनसक्छन् –
ताजा फलफूल तथा सागसब्जी रहित भोजन ।
एनोरेक्जिया तथा त्यो जस्तै अन्य मानसिक रोगहरु ।
एलर्जीका कारण खानपानमा रोकतोक ।
बढ्ता मोटोपना ।
अत्यधिक रक्सी सेवन ।
आईरनलाई पचाउन र कोलाजेन निर्माण गर्नका लागि भिटामिन सी अत्यावश्यक हुन्छ । यदि शरीरमा कोलाजेनको निर्माणमा कमी आयो भने टिस्यूहरु टुक्रन थाल्छन् । डोपामिनको निर्माण तथा नरएपिनेफ्राइन, एपिनेफ्राइन र कार्निटिनको निर्माण मा पनि भिटामिन सी को दरकार पर्दछ । भिटामिन सी को कमी भएका लक्षणहरु कमी भएको ८ साता देखि १२ साता मा देखिन थाल्छन् । आरम्भिक लक्षणमा भोक नलाग्नु, तौल घट्नु, कमजोरी को अनुभव हुनु र अल्छी लागिरहनु आदि पर्दछन् । अन्य लक्षणहरुमा –
हाड दुख्ने समस्या ।
शरीर सुन्निनु तथा अनुहार फुल्नु ।
छालामा मसिना राता टीका देखिनु ।
कपाल रुखो हुनु ।
गिँजाको रोग लाग्नु र दाँत झर्नु ।
घाऊ खटिरा छिटो निको नहुनु ।
श्वासप्रश्वासमा तिब्रता हुनु ।
डिप्रेशनको लक्षण देखिनु ।
रक्तस्राव नरोकिनु ।
स्कर्भी को निदान
बिरामी का लक्षण हेरेर र रगत मा भिटामिन सी को परीक्षण गरेर स्कर्भी भए नभएको पहिचान गरिन्छ । आन्तरिक क्षति भएको छ भने विभिन्न एमेजिङ परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्कर्भीको उपचार भनेकै शरीरमा भिटामिन सी आपूर्ति गर्नु हो । बिरामीको समस्या र अवस्था हेरेर बिरामीलाई मुखबाट या इन्जेक्शनबाट भिटामिन सी दिइन्छ । स्कर्भीका बिरामीलाई दिइने भिटामिन सी को मात्रा एस प्रकार छ –
१ देखि २ ग्राम प्रति दिन २ देखि ३ दिन सम्म ।
यसपछिका सात दिन सम्म ५०० मिग्रा प्रति दिन ।
यसपछि तीन महिना सम्म १०० मिग्रा प्रति दिन ।
स्कर्भीबाट बच्न के गर्ने ?
पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी खाने गर्नाले स्कर्भीको समस्या देखिन पाउँदैन । तेसका लागि साइट्रस परिवारका फलफूल लाभदायक हुन्छन् । अमला, कागती, सुन्तला आदि फलफूल तथा गोलभेंडा, हरिया सागसब्जी, हरियो खुर्सानी आदि सागसब्जीहरु भिटामिन सी का उल्लेखनीय स्रोत हुन् ।
( डा. परिमल कोइरालाको सहयोगमा)
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २३, २०७८, ०७:१९:००
जानी राखौ! लसुन खानुका १५ फाइदा र ५ बेफाइदा
के हो एपेन्डिक्स ? यसको कारण, लक्षण र उपचार
यी हुन् मृगौलाका बिरामीले खान हुने तथा नहुने कुरा
किन खाने क्वाँटी ? यस्ता छन् १२ फाईदा
आइतबार, भदौ ६, २०७८ जनता नेपाल
आज जनै पूर्णिमा । यस दिनको विशेष खान्की हो, क्वाँटी । त्यसो त हरेकजसो पर्वको आ–आफ्नै विशेष परिकार हुने गर्छ । जस्तो तिहारमा सेलरोटी, दशैंमा मासु, माघे संक्रान्तिमा कन्दमुल, असार पन्ध्रमा दही चिउरा । झ्ट्ट हेर्दा लाग्छ, यो खाने संस्कृतिको आधुनिक जीवनसँग कुनै साइनो छैन । यो त केवल आडम्बर हो । पुरातन संस्कार हो । परम्परा धान्नका लागि मात्र यसो विधि पुर्‍याउने हो । पुरा पढ्नुहोस्
आज क्‍वाँटी खाने पर्व, यस्तो छ स्वादिष्ट क्वाँटी बनाउने तरिका
जनैपूर्णिमा अर्थात रक्षा बन्धन देशभर मनाइँदै छ । नेवार समुदायले पनि आज गुँपुन्ही पर्व धुमधामका साथ मनाउँदैछन् । आजकाे दिन नेवार समुदायले कम्तीमा विभिन्न प्रकारका नौ थरी गेडागुडीको मिश्रण क्वाँटी खाने गरेका छन् । यही प्रचलन नेवार समुदायबाट बिस्तार भएर अन्य समुदायले पनि आजको दिन क्वाँटी खाने प्रचलन चलेको हो । पुरा पढ्नुहोस्